Ioli yeJojoba yinto enobuncwane bomnatha wegolide. Yifumane kwimbewu yesityalo saloo gama, ekhula kakhulu kwimimandla yaseArizona, eMexico naseCalifornia. Ngaloo ndlela, umlimi omkhulu kule oli iUnited States.
Ukucocwa kweoli jojoba ngumbane ongenambala ongenawo uvumba. Ekubeni idume ngeendawo zayo zokunyusa, kwi-cosmetic imboni le oil iyona nto ibaluleke kakhulu. Ukongezelela, luyinxalenye ebalulekileyo yamaccuos and many conditioners. Ioli yeJojoba nayo inxalenye yemveliso yokunakekelwa kwesikhumba. Nangona kunjalo, luncedo ngakumbi kwizinwele kunye ne-scalp.
Namhlanje, iingxaki ezinjenge-dandruff, ukulahleka kweenwele kunye nokomisa, ukuphela kweempepha kusasazeka. Isizathu sokuba kwenzeke kwabo kubonakala kwizinto zamachiza, izinto ezinobungozi zangaphandle kunye neemveliso zezinwele. Yingakho ungeke ugcine izinwele zakho ziphilile.
Ngokwakheko, i-jojoba i-oli ifana neoli edibeneyo eveliswa yizigulane ezixhambileyo. Kungenxa yesi sizathu sokuba ioli isetyenziswa ukulawula izinga lemveliso yalo.
Amanqatha aveliswa yizigulane ezigciniweyo zigcina iingcambu zeenwele eziphuculwe kakuhle. Nangona kunjalo, ubukhulu bayo bukhokelela ekubunjweni kwesalathisi se-scalp kwi-scalp, ukuvalela izinwele zeentloko. Esi sizathu sokuba ukulahleka kunye neenwele, kunye nokunciphisa ukukhula kwabo.
Ekubeni i-jojoba i-oyile iyisisombululo esisebenzayo sokuhlanjululwa kancinci nokucokisekileyo kwe-scalp, inceda ukusombulula ingxaki ngexabiso elikhulu le-sebum eveliswayo, ngoko uya kulahlekelwa yintliziyo kwaye ufumane ubunzima obubuhlungu.
Ezinye izakhiwo ezincedo
Ukuhlamba i-scalp ngeoli jojoba kuya kuphucula ukusabalalisa. Siyabulela oku, iinwele ziya kukhula ngokukhawuleza;
Ekubeni i-jojoba i-oil ine-antibacterial and antifungal properties, ukusetyenziswa kwayo kunceda ukugcina impilo ye-scalp;
Isombulula ingxaki yokulahleka kweenwele ezibangelwa zizifo ezinjenge-dermatitis ye-scalp, i-psoriasis kunye ne-eczema;
Eli diliya yimeko efanelekileyo kakhulu yeenwele, ukunceda ukulungelelanisa imeko yezinwele ezinomileyo;
Ukusetyenziswa kweoli jojoba kwenza izinwele zibe zikhanya ngakumbi, ukunciphisa umonakalo wazo ngenxa yezinto zangaphandle.
I-oliest "i-jojoba ioli ibizwa ukubaluleka kwayo njengendlela yokunyamekelwa kweenwele nakwezo zihlandlo zakuqala xa amanxeba angamahlathi ayengenakwamkelwa ngenxa yokuvinjelwa kwe-whaling. Ngenxa yokuphucula kunye nokunyusa, iyaziwa kuluntu ukususela kwangaphambili. Namhlanje, ioli iyasetyenziswa ngokunyamekela ulusu kunye nokukhuthaza ukukhula kweenwele.
Kushisa ioli kwaye usebenzise isiqwenga, sisebenzise esikhumbeni kwiingcambu zeenwele. Ukuhlawula intloko yakho. Emva kwentloko ye-chaspomovte kunye ne-shampoo elula, ngokucokisekileyo xa uhlamba ioli. Ukuba iinwele zakho zifuna ukondla okongezelelweyo, faka ijojoba ioli jobaba.
Njengomoya wokumisa umoya
Ukuba iinwele zakho zomile, ke usebenzisa i-conditioner, yongeza i-teaspoonful yeoli phezu kwexesha elide. Faka isicelo se-conditioner phezu kobude obude bezinwele, ushiye imaminithi embalwa nje, ucoce ngobumnene. Emva koko, akukhuthazwa ukusebenzisa i-shampoo.
Enye indlela yokusebenzisa (kunye neenwele ezomileyo) - gubungela inani elincinci leoli kwizinwele ezinamanci.
Ioli yeJojoba ayisetyenziselwa ukulungisa. Njengoko kuchaziwe ngasentla, ilawula ukuveliswa kwe-sebum, ngoko ke ingasetyenziswa ukuphatha imicu kunye nokunakekelwa kwesikhumba seoli. Ioli inceda ekuthintela ukugqithwa kwee-pores, ezibangela ukubonakala kweentaka. Ioli yeJojoba ilula kwaye iyancika, yintoni eyenza lula kwaye ixakeke ngokukhawuleza yesikhumba, ihlale imanzi ngosuku.
Ukuqwalasela ukuba kunceda ukuguqula imibimbi kakuhle, i-jojoba i-oli yinxalenye yemveliso yokuguga.
Siyabulela ukuba le oli efunekayo yenza ngokufanelekileyo kwilusu nakwezinwele, inokuthi ithathwa njengomkhiqizo wezonyusa jikelele.
Unokukhetha njani ukhilimu we-salon yokucoca?
Indlela yokukhetha i-garnet enomnandi
Indlela yokuphatha amaconsi kwimilenze
Kutheni sifuna ukuzisola kunye nendlela yokulahla lo mkhuba
Uxolo kangakanani ukuhlala nomyeni wakhe?